Fikarohana momba ny firaisana Fahatsiarovana ny tantaram-pianakaviana fahiny momba ny tantaram-pianakaviana ao Hanan Monsour Suzanne Ghanem - Fikarohana momba ny vatana teraka
From: Old Souls, nataon'i Tom Shroder
Article by: Walter Semkiw, MD avy amin'ny & ateraka indray ary Fiverenan'ny revolisionera
Hanan dia teraka tany Libanona, tamin'ny tapaky ny taona 1930. Fony roapolo taona izy dia nanambady an'i Farouk Monsour, mpikambana ao amin'ny fianakaviana lavadrano iray hanao Libaney. Nanan-janaka roa vavy izy mivady, Leila sy Galareh no anarany. Hanan dia nanana anadahy iray antsoina hoe Nabih, izay nanjary nalaza teo amin'ny fiarahamonina Libaney, saingy maty tamin'ny fahatanorany nianjera tamin'ny fiaramanidina.
Rehefa avy nametraka ny zanany vavy faharoa i Hanan dia namorona olana iray ao am-po ary nanoro hevitra azy ny dokotera mba tsy hanan-janaka intsony. Raha tsy nanaraka ilay fampitandremana izy dia nanana zanaka fahatelo, zanaka lahy tao amin'ny 1962. Tao amin'ny 1963, fotoana fohy taorian'ny nahafatesan'i Nabih anadahiny, dia nanomboka niharatsy ny fahasalaman'i Hanan. Nanomboka niresaka momba ny fahafatesana izy avy eo. Nilaza i Farouk, vadin'i Hanan, fa nilaza taminy i Hanan fa "hiverina amin'ny toerany indray izy ary hilaza zavatra maro momba ny fiainany taloha." (1) Roa taona talohan'ny nahafatesany.
Talohan'ny nahafatesany, nanandrana ny handefa an-tariby an'i Leila i Hanan
Tamin'ny enina amby telopolo taona dia nandeha nankany Richmond, any Virginia, i Hanan mba handidiana fandidiana. Niezaka nitelefaonina an'i Leila zanany vavy izy talohan'ilay hetsika, saingy tsy afaka namakivaky izany. Maty noho ny fahasarotana i Hanan ny ampitson'ny fandidiana.
Fifandraisana ara-panahy: Fampitana fanambarana avy amin'ny zavaboary ara-panahy
Folo andro taorian'ny nahafatesan'i Hanana dia teraka i Suzanne Ghanem. Nilaza tamin'i Ian Stevenson ny renin'i Suzanne fa fotoana fohy talohan'ny nahaterahan'i Suzanne dia “nanonofy aho fa hiteraka zazavavy. Nihaona tamina vehivavy iray aho ary nanoroka sy namihina azy. Hoy izy: 'Hanatona anao aho.' Tokony ho efa-polo taona ilay vehivavy. Taty aoriana, rehefa nahita ny sarin'i Hanan aho dia noheveriko fa toa ilay vehivavy tao amin'ny nofiko. ”(2)
Amin'ny teny hafa, ny renin'i Suzanne Ghanem dia nanonofy fa hanan-janaka iray izay nanana ny endrik'i Hanan Monsour, ary nanjary zava-misy io nofinofy io.
Hanan Reincarnates ho an'i Suzanne Monsour & manandrana mandefa an-telefaona ny fiainam-pianakaviany taloha Leila
Tamin'ny taona 16, nalain'i Suzanne ny telefaona tao amin'ny fihobiana, toy ny hoe niezaka hiresaka taminy izy, ary niteny foana hoe "Hello, Leila?" Tsy fantatry ny fianakaviana hoe iza i Leila. Rehefa nihalehibe izy, dia nanazava i Suzanne fa iray tamin'ireo zanany i Leila ary tsy i Suzanne, fa i Hanan. Nanontany ilay fianakaviana hoe: "Hanan inona?" Namaly i Suzanne hoe: "Mbola kely ny lohako. Miandry mandra-pahatongan'izany dia mety hiteny aminao aho. "(3)
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Suzanne dia mamantatra sy manome anarana anarana momba ny fiainam-pianakaviana 13 taloha
Tamin'ny fotoana niarahany tamin'izy roa taona dia nanonona ny anaran'ireo zanany hafa, Farouk vadiny, ary ny anaran'ny ray aman-dreniny sy ny rahalahiny avy amin'ny fiainana teo aloha - anarana telo ambin'ny folo tamin'ny rehetra.
Nandritra ny fiezahana hitady ny fiainan'ny fianakavian'i Suzanne taloha, ireo olom-pantany ao amin'ny Ghanems dia nanadihady tao amin'ny tanàna izay niainan'ny Monsours. Rehefa nahare momba izany raharaha izany ry zareo dia nitsidika an'i Suzanne i Monsours. Ny Monsours dia nisalasala momba ny fanambaran'ilay zazavavy tamin'ny voalohany. Lasa mpino izy ireo rehefa namantatra ny havan'i Hanan rehetra i Suzanne, ka nanangona azy ireo ary nanonona azy ireo tamin'ny fomba marina. Fantatr'i Suzanne koa fa nomen'i Hanan ny firavany ho an'i Hercule rahalahiny any Virginie izy, talohan'ny fikarakarana ny fony, ary i Hanan dia nampianatra ny anadahiny mba hizara ny firavaka eo amin'ireo zanany vavy. Tsy nisy olon-kafa ivelan'ny fianakaviana Monsour mahafantatra ireo vatosoa.
Talohan'ny namakiany na nanoratra, dia nanisa ny nomeraon-telefaoniny i Suzanne tamin'ny taratasy iray. Taty aoriana, rehefa nandeha tany an-tranon'ny Monsour ny fianakaviana, dia hitany fa mifanitsy amin'ny isa an'ny Monsour ny nomeraon-telefaona, afa-tsy ireo dika roa farany. Nandritra ny naha-zaza an'i Suzanne, dia afaka nitanisa ny lahateny nambara tamin'ny fandevenana an'i Nabih, rahalahin'i Hanan. Ny fianakaviana Suzanne dia nanoratra ny tsikera, na dia tapaka aza ilay kasety.
Suzanne dia mbola tia an'i Farouk, ilay vadiny taloha
Niantso an'i Farouk intelo isan-kerinandro i Suzanne, dimy taona. Rehefa nitsidika an'i Farouk i Suzanne dia hipetraka eo am-pofoany izy ary hametraka ny lohany hanohitra ny tratrany. Nandritra ny 25 taona, dia mbola niantso an'i Farouk i Suzanne.
Suzanne dia mamaritra ny fiainan'ny namana taloha avy amin'ny sary
I Farouk, polisy mpanafika, dia nanaiky an'i Suzanne ho teraka tamin'ny nahaterahan'i Hanan vadiny. Mba hanohanana an'io famaranana io, nanamarika i Farouk fa avy amin'ny saripika, Suzanne dia nanala tanteraka ireo olona marobe efa fantatr'izy ireo, ary nahalala vaovao hafa izay hany fantany ihany.
Amin'ity fampitahana ity dia eo an-kavia i Hanan Monsour ary eo ankavanana i Suzanne Ghanem. Misy fitoviana mifototra amin'ny toe-javatra manjavozavo, izay manohana ny haavon'ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny nofo iray manontolo. Azonao atao ny manitatra azy io amin'ny alàlan'ny klikanao. Ampiasao ireo bokotra arrow mba hivezivezy eo amin'ny sary.
Ian Stevenson, MD, ny tranga vaovao momba ny fanambadiana, izay mampiseho amin'ny fomba mampihetsi-po ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny fiainan'ny iray hafa dia ny: Rashid Kaddege | Daniel Jurdi
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Suzanne Ghamen dia manana endrika mitovy endrika an'i Hanan Monsour, ny toetrany taloha.
Zava-dehibe ny manamarika fa ian Stevenson dia nianatra voalohany an'i Suzanne tany Libanona fony izy mbola zaza kely ihany tamin'ny faran'ny 1960. Niverina tany Suzanne izy tamin'ny 1998 rehefa nandeha tany Libanona niaraka tamin'i Tom Schroder, mpanao gazety niaraka tamin'ny Washington Post izay nanoratra boky momba an'i Stevenson. Tao amin'ny 1998, Suzanne dia 35 taona ankehitriny ary tamin'izay fotoana izay no nahafantaran'i Stevenson fa i Suzanne dia manana endrika mitovy endrika tahaka an'i Hanan Monsour. Izany dia nitranga teo amin'ny 30 taona taorian'ny nianaran'i Stevenson voalohany an'i Suzanne tao amin'ny 1960. Ny tanjona dia ny hanohizantsika hatrany ny porofo vaovao mifandraika amin'ny tranga izay efa niova nandritra ny am-polo taona.
Ny tranga Amerikana iray izay ahitana ny sarin'ny fiainana maherin'ny roa izay mampiseho mampiseho amin'ny endriny ara-batana:
Trangam-panjakan'olo-tokana ho an'i James Huston, Jr. | James Leininger
Ny Fanahy Mitarika: Nanambara ny fahaterahany ho reniny ho avy i Hanan tamin'ny nofy. Ho fanampin'izany, ny fanahin'i Hanan dia toa nahafantatra fa Hanana tsy ho faty aloha loatra ary hateraka indray amin'ny fahatsiarovana ny fiainany taloha, satria i Hanan dia naminavina ity fisehoan-javatra ity tamin'i Farouk vadiny. Ao amin'ny andiany 1200 nanamarina ny tantaram-piainana taloha momba ny fiainana, ny fanambarana nofy dia voamarina tamin'ny 22 isan-jaton'ireo tranga ireo.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Amin'ny maha Suzanne azy, dia nihaona tamin'ny Monsours, ny fiainany taloha, i Hanan, ary naneho fitiavana sy firaiketam-po tamin'i Farouk, ny vadiny taloha.
Ny fihenam-bidy: Teraka 10 andro taorian'ny nahafatesan'i Hanana i Suzanne. Raha heverina fa ny fanahy dia voarohirohy amin'ny fampiroboroboana ny foetus, dia ny fanahin'i Hanan no nanome aina ny zaza ao an-kibon'i Suzanne raha mbola velona i Hanan. Ity imbetsaka mihoatra ny androm-piainana ity dia niseho nandritra ny faharetan'ny fihetsik'i Suzanne rehetra.
Fanamarihana hoan'ny mpamaky: Ian Stevenson, MD dia profesora momba ny Psychiatrie tao amin'ny Oniversiten'i Virginia, izay nanoratra tamina karazana akademika tena izy, satria mpahay siansa ny mpihaino azy. Ao amin'ny tranokalan'ny vohikala Reincarnation, ny tranga niainany taloha dia aseho tantaram-pitadiavana fiainana taloha an'ny ankizy mba hanamora ny fahatakarany ny asany akademika. Ho an'ireo izay liana amin'ny fankasitrahana ny fikarohana ara-tsiansa, toy ny fampiasany vavolombelona marobe mba hametrahana fijoroana vavolombelona voamarina, azafady, azafady ny tatitra voalazan'ny Dr. Ian Stevenson.
1. Shroder, Tom: Old Souls, Fireside / Simon sy Schuster, NY, NY, 2001, p. 81